नेपाल-भारत सुरक्षा अधिकारी बैठकमा सधैं पूरानै एजेण्डा « Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha
अम्बर गुरुङ मानार्थ महासेनानी »
नेपाल-भारत सुरक्षा अधिकारी बैठकमा सधैं पूरानै एजेण्डा
बाँके, अषाढ ८ – नेपाल-भारत सुरक्षा अधिकारीबीच बर्षमा दुई/तीन पल्ट बैठक हुने गरेको भएपनि सबै बैठकका एजेण्डा उस्तै हुने गरेका छन् । दुई देशबीचका स्थानीय अधिकारीबीचको बैठकको छलफलको ऐजेण्डा स्थायी छ ।
दसगजामा रहेका पीलरको सुरक्षा, सीमामा हुने आपराधिक गतिबिधी, हातहतियार ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने विषय ती बैठकहरुका लागि स्थायी एजेण्डा हुन् । त्यसैगरी, अबैध काठ तस्करी, वन्यजन्तु चोरी शिकारी, सीमा अतिक्रमण, चेलिबेटी विचबिखन, चोरी तस्करी, लागुऔषध नियन्त्रण बारे बैठकमा छलफल हुने गरेको छ ।
गएको साता बाँके र बर्दिर्याका सुरक्षा अधिकारीहरुले भारतको बहराईचमा भएको बैठकमा ती पुरानो एजेण्डालाई नै निरन्तरता दिए । पटक-पटका बैठकमा ती विषयहरुमा नै निर्णय भएपनि व्यवहारमा कहिल्यै कार्यान्वन भएको छैन ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र घिमिरले नेपालका तर्फबाट ९ वटा एजेण्डामाथि भारतीय अधिकारीहरुसंग छलफल गरेको बताए ।
मोस्टवान्टेड सूचीमा रहेका अपराधिहरु भारतमा निर्वाधरुपमा बसिरहेको भन्दै पक्राउ गर्न नेपालका अधिकारीहरुले सहयोगका लागि आग्रह गरे । यस अघिको बैठकमा नेपालका सुरक्षा अधिकारीले तीन दर्जन मोस्ट वाण्टेड अपराधिहरुको सूची भारतीय अधिकारीहरुलाई बुझाएका थिए ।
भारतीय भूमिमा बसेर नेपालमा अपराधिक क्रियाकलाप गरिरहेको भन्दै उनीहरुलाई पक्राउ गर्न नेपालका अधिकारीहरुले माग गर्दै आएका हुन । तर, भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरुले आश्वासन दिने तर उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने कार्यमा सहयोग गरेका छैनन् ।
सशस्त्र समूहले भारतभुमिबाट नै व्यवसायीहरुसंग चन्दा माग्ने गरेको गुनासो नेपालका अधिकारीले गर्दै आएका छन् । तर, भारतीय अधिकारीहरुले भने नेपाल प्रहरीले बुझाएको अपराधीहरुको खोजतलास जारी रहेेको र हालसम्म नभेटिएको जवाफ फर्काए ।
त्यसैगरी दुई देशको सिमानामा भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा खल्डो खन्ने र बाटो निमार्ण गरेको बारे ध्यानार्षण गराएको प्रजिअ घिमिरले बताए । नेपाल-भारत आवातजावत गर्दा नेपालीहरुलाई भारतीय पक्षले दुःख दिने गरेको गुनासो गरिएको छ । भारतीय अधिकारीहरुदे नेपालीहरुलाई निर्वाधरुपमा आवातजावत गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाए । यसअघिको बैठकमा पनि यो विषय प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ ।
नेपालका अधिकारीहरुले दुई देशबीचको बैठकले गर्ने गरेको निर्णयलाई कार्यान्वन गर्न भारतीय पक्षसंग आग्रह गरे । ‘निर्णय मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको बारे भारतीय अधिकारीलाई जानकारी गराएका छौ,’ प्रजिअ घिमिरेले भने ।
त्यसैगरी, भारतले निमार्ण गरेको लक्ष्मणपुर बाँधका कारण राप्ती आसपासका गाउँ डुबान हुँदै आएको भन्दै भारतीय पक्षलाई जानकारी गराइएको छ । बषर्ातको समयमा बाँधको गेट नखोल्दा डुबान हुने गरेको भन्दै दुई देशबिच सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमतिका भएको छ । नेपालगन्ज रुपैडिहा नाकामा एकिकृत चेकपोष्ट निमार्ण तिव्र गतिले भइरहेको नेपालका अधिकारीहरुले जानकारी दिए ।
This entry was posted on June 22, 2011 at 7:47 pm	and is filed under समाचार. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.